“Han-sare Iyo Hab-Dhaqan Wanaagsan Ayaa Kaaba; Cilmigii Aad Kabatay Iyo Waaya Aragnimadii Aad Kasbatay” | Hangool News
“Han-sare Iyo Hab-Dhaqan Wanaagsan Ayaa Kaaba; Cilmigii Aad Kabatay Iyo Waaya Aragnimadii Aad Kasbatay”
October 4, 2017 - Written by Hangool News 1
Waa kuma Aqoonyahan? Cilmi baadhe Cabdi caziiz cartan ayaa Aqoonyahan macneeyay. Wuxu yidhi hadal sidan oo kale macnihiisu yahay “ waa qof wax bartay, oo hab dhaqan wanaagsan. Haddii labadaa midkood meesha uu ka baxo magaca aqoon yahan isna meesha wuu ka baxayaa”. Haddii aynu xisaab ka dhigno sidan ayay noqonaysaa: (Aqoon+Habdhaqan wanaagsan = Aqoonyahan)
Aqoonta isla garanay oo waa wixii aad baratay. Haddaba Habdhaqanka aynu u baahanay ee magaca ama mansabka aqoon yahan ina gaadhsiinayaa muxuu yahay?. Anigoo argatidayda cabbiraaya. Habdhaqanka wanaagsani waa Qiyam. Qiyam kuna waa in qofku uu bari ka noqdo ficilida iy
fikradaha taban ee ka dhigaaya qofka mid hooseeya. Isla markaana uu ku sifoobo fikiro iyo ficilo togan.
Is fahankeennu ha soo durkee aynu tusaaleyno. Waxaad arkaysaa arday wax barashadii jaamacada dhamystay oo haddana Qaad ruugaaya. Waxa aynu odhan karnaa waa ficil ama fal taban. Haddii aad tidhaa maxaa kugu kalifay. Wuxuu ku odhanaya waqtiga ayaan isku dhaafiyaa ama waxbaan ku arrimiyaa ama waxbaan ku diyaariyaa iyo waxyaaba la mid ah. Taasina waa fikirka taban. Ficilkaa iyo fikirkaa taban waa midka hoos u dhigaaya qiyamkii kaa dhigaayay mid leh hab-dhaqan wanaagsan. Isla markaana dhamystiraayay aqoontii aad baratay. Kuna gaadhsiinaayay mansabka aqoonyahan. Qaadka tusaale ayuunbaynu usoo qaadanaye, Waxyaabaha habdhaqankaaga ka dhigaaya mid liitaa aad ayay u badanyihiin. Waxaa ka mid ah qabyaaladda, dhaqan xumada, gardarrada, cayda, qallafsanaanta, xatooyada iyo wax kasta oo kasoo horjeeda sharciga dalka, bini’aadannimada iyo diinteenna suuban.
Qallin jabin, maxaa xiga? Aniguba ka midbaan ahaye; Ma garanayo sababtu magaca in ay tahay. Ma Qallinkan la jabinaayo ayaa sabab u ah in aynu is dhigano. Ma laga yaabaa in aynu uba maleenay wax intaa ka dambeeyaaba in aanuu jirin? Waxaad moodaa dhallinyaradeenii dalka wax u baratay intoodii badanyd in ay soo wajahdo hanyaraan ku kooban shaqada iyo shillinka. Halka kuwa kalana aad saluugayso hab-dhaqankooda. Iyaga (intan wax baratay) waxaan bartilmaameed uga dhigtay dadaalkoodii badnaa iyo geeddi socodkii dheeraa in uu khasaaro ma rabno, ee waa in uu jiraa wax lagu kala garto iyaga iyo kan suuqa joogay ee aan isba hawlin.
Hanka iyo himmada sare: Guushu waa socdaal ee maaha maxaddo ama istaan. Himmada sare waa midka ku dhaxalsiisa marka aad istaan soo gaadhaba in aad mid kale uga gudubto (from success to success).
Meeyay hankii sare ee lagu yaqaanay ruuxa muslin ah, meeye awoodihii faraha badnaa ee Alle (swt) kugu maneystay. Meeday tamartii dhallinyarannimo. Maxaa kugu koobay in waxa aad ka fikirto iyo waxa aad u dhaqaaqdaaba uu noqdo sidii aad caloosha wax ugu ridi lahayd. Maxaa kaa dhigay mid ku qanacsan in uu noolaado oo kaliya… Haa Waxay ahayd marba haddii jaamacaddihii la dhameeyay in meel kale loogasii gudbo. Shaqadu waa mid ka mid ah himmilooyinkii oo lama diidanaa. Laakiin is weydiintu waxa ay tahay maxaa kuu dheer. Ma tahay mid fikir iyo hammi umad xambaarsan. Ma tahay mid aan kibir badnayd haddana aan isku quudhayn meel hoose. Ma tahay mid jecel in uu dadka iyo dalka wax kusoo kordhiyo.
Waa suurta gal hankaagu in uusan gaadhsiisneyn danta guud. Aan uba yimaado dantaada gaarka ah. Adigu halkee ayaad rabtaa in aad gaadho. Meesha ugu fog ee aad hiigsanaysaa ma inaad u shaqayso haayad, wasaarad ama shirkad baa. Misa waa kumeel gaadh oo rabitaankaagu intaa wuu ka durugsanyahay. ma ku fikirtaa in aad adigu noqoto midka loo shaqeeyo. Hadday tahay haa, qorshaheedii iyo dadaalkeedii ma leedahay misa waad jeceshahay oo kaliya. ????
Weydiimahan aynu ka jawaabno, wax badanna aynu xisaabtanno. Si aqoonteennu ay u noqoto mid dhameystiran.sidoo kale aynu kor u qaadno hankeenna iyo habdhaqankeenna.
Qarni kasta bog cusub ayaa furma. Jiil ka mid ah jiilashii umadaha soo maray ayaynu nahay. Raad iyo wax la inaga dhaxlo aynu u diyaar gareyno kuwa inaga sii dambeeya hadduu Allaha awoodda leh idmo.
Si taasi inoogu hirgasho. Wax barashdu yaanay noqon mid joogsata. Haddiiba ay istaagto tii iskuulku. Naftaadu in ay wax is bartaa yaanay marnaba hakad galin. Hadda wax akhris dhab ah bilaw. Haddaad awalkii hore wax u akhriyi jirtay in aad imtaxaan iyo galaas kaga gudubto . waxaad ogaataa imka in aad u baahanatahay in aad wax u akhrido si aad aqoon dhab ah aad u yeelato, ulana jaan qaado adduunyadan ilbidhiqsiyada isku badbadalaysa ee xawaaraha ku socota. Haa sababta oo ah maad Qallin-jabin ee xaqiiqdu waxa ay tahay imaka ayuunbaad Qallin-qoratay. Sidoo kale ka dheerow ficilada iyo fikiradaha taban ee ka dhigaaya habdhaqankaaga mid hooseeya. Madaxaaga kor u qaad, naftaadana garwaaqso. Ogsoonow in aad muhiim tahay. Guusha iyo farxadduna maaha kuwa dhamaada haddii aanaad adigu soo gabagabayn